ओलीको विकल्प काँग्रेसले होइन नेकपाले खोज्ने हो -
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका नेता दीपक खड्काले देशमा सरकारनै आपराधिक कार्यमा सक्रिय रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले कोरोना महामारीको बेलामा सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै त्यसले केपी शर्मा ओली सरकारको वास्तविकता उजागर भएको बताएका छन् । खड्कासँग यीनै विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
राहतको कुरा गरिरहँदा अलपत्र परेकाहरुलाई तपाईंले घर–घर पुर्याउनुभयो ?
मैंले व्यक्तिगत हिसाबले पठाउने प्रयासहरु गरिरहेको छु । हिजो बेलुका मात्रै पनि संखुवासभाका दुई, तीन सय मानिसहरु जानुभएको छ । महिना दिनसम्म सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो । दैनिक काम गरेर खानुपर्ने मानिसहरु जो थिए । उनीहरुले सरकारबाट राहत पनि पाएनन् । त्यो बर्गका मानिसहरुले अहिले नेपालमा सरकार छ भन्ने अनुभूतिसम्म गर्न पाएका छैनन् । अहिले केन्द्रीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन । लगभग अहिले मुलुक सरकारविहिन भएको छ । त्यसले जिल्लाका जिम्मेवारी साथीहरुले आफूले सकेको केही कामहरु गराखेका छन् । अहिले यो सरकारले न जनतालाई खान दिनसक्छ न घर पुर्याउन सक्छ ।
सरकारले हामीले धेरै राम्रो काम गरेका छौं भनेको छ त ?
यहाँ सरकार छ ? यो सरकार हो ? यो माफियाहरुको समूह हो, यस्तो पनि सरकार हुन्छ । यसले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि हनन् गरेको छ । मान्छेलाई घरभित्र थुनेर राखेको छ । न उनीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षा छ । न खानको लागि राहत दिन सकेको छ। यसमा सरकारको विरुद्धमा बोल्यो भने ल्याएर थुनेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारले कसलाई थु्नेको छ ?
निर्णय गर्छ, अहिले महामारी फैलिएकाले जेल बसेका ६० वर्षमाथिका मान्छेहरुलाई छोड्नुपर्छ भनेर । पूर्व सचिव भीम उपाध्ययलाई स्टाटस लेखेका भरमा समातेर हिरासतमा राखिएको छ । मैले तपाईंंकै मिडियाबाट सुनेको थिएँ । पूर्व आईजीपी, सांसद्, मन्त्रीहरु भएर अर्का पार्टीका सांसद्लाई अपहरण गर्न थालेका छन् अनि त्यसलाई सरकार भन्नुहुन्छ तपाईं ? यो सरकार हो ? सरकारले यस्ता क्रियाकलाप गर्छन् । सरकार भन्ने शब्दको अपमान गरिएको छ । कानुनी राज्यको उपहास गरिएको छ । एकातिर कोरोनाको समस्या छ अर्को अध्यादेश ल्याएर फिर्ता गरिराखेका छ । यस्तो पनि सरकार हुन्छ । समस्या परेका बेला जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न नसक्नेलाई सरकार भन्छन् । अहिले हज्जारौं मान्छेहरु बोर्डरमा अलपत्र परेका छन् । त्यहाँ खाद्यान्न छैन, उनीहरुको स्वास्थ्यका विषयमा केही गर्न सकेको छैन । अरु देशका मान्छेहरुले एउटा मान्छेको लागि प्लेन चार्टर्ट गरेर लिएर गए । सरकार त त्यस्तो पो हुन्छ । यहाँ त घरभित्र मान्छे थेनेर राख्ने अनि खान नदिने यो सरकार हो।
सरकारले काम गर्न सकेन भनिरहँदा तपाईंको सुझाव के त ?
मेरो आग्रह छ, यत्रो बहुमत पाएको सरकारले मतको सदुपयोग गर्नुप¥यो । जनतालाई सरकार भएको अनुभूति हुनुपर्यो । जनउत्तरदायी भएर कर्तव्य निष्ठातिर सरकार लाग्नुपर्यो । आतंककारी र माफियाले गर्ने जस्तो व्यवहार सरकारले गर्न सुहाउँदैन । हेर्नुहोस् एकजना व्यक्तिको कारण यत्रो प्रहरी फोर्सको बद्नामी भएको छ । सांसद्, मन्त्रीहरुको बद्नामी भएको छ । राज्यको अरु देशसामु बद्नामी भएको छ । त्यसकारण सरकार जिम्मेवार बनोस् म यही आग्रह गर्न चाहन्छु । दिनैपिच्छे कमाएर कानुपर्ने मान्छेले सरकारलाई समर्थन गरेर भोको पेटले कोठाभित्र बसिदिएको छ । अनि राहत बाँड्ने बेलामा कुन पार्टीको सदस्य, कुन जिल्लाको मान्छे मेरो कि तेरो भनेर राहतका नाममा आहत पु¥याइएको छ । सम्पूर्ण नागरिकको चुल्हो बाल्ने काम सरकारले गर्ने होइन ? यहाँ खान दिन सक्दैन भने उनीहरुको घर छेउ पु¥याइदिनुप¥यो । खाली कुरा गरेर मात्रै हुँदैन व्यवहारमा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ सरकारले । यस्तो महामारीमा पनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छ । जे छोयो त्यसैमा भ्रष्टाचार भनेको छ । त्यसको समाचार लेख्यो विरोध ग¥यो, कुरा उठायो भने समातेर थुनेको छ । कतै पहरण गरिएको छ, कतै कालाबजारी भनिएको छ । मान्छे मन परेन भने वाकतन्त्रता हनन् हुने गरी समातेर थुनेको छ । त्यतातिर सरकार लाग्नुभएन ।
केपी शर्माको विकल्प खोज्नुभएको हो, नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो ?
हामीले कसैको विकल्प खोज्ने होइन । यो पार्टीलाई जनताले पाँच वर्षको म्यान्डेट दिएका छन् । त्यो पार्टीभित्र उहाँहरुले विकल्प खोज्नुपर्छ । विकल्प खोज्दा पनि सरकार चलाउन सक्छन् सक्दैनन् ? मान्छे फेरिएर मात्रै भएन उहाँहरुले पनि सही ढंगले चलाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो सबै खोज्ने जिम्मा नेकपाको हो । यो हाम्रो नेपालको दूर्भाग्य नै हो कि यति ठूलो जनमत पाएको सरकार अनउत्तरदायी हुँदा सरकार भन्ने शब्दको बद्नामी भएको छ । त्यसैले हामीले कसैको विकल्प खोजेको होइन । विकल्प उहाँहरुकै पार्टीले खोज्ने हो । होइन, सरकार चलाउन सकिँदैन भने राजीनामा दिने हो । यसरी सरकार चलाउन पाइँदैन । यस्तो रवैयाको विरुद्धमा जनता उत्रिन्छन् ।